मृत्यु गर्न अनावश्यक राख्नु गर्नुपर्छ? | Apg29
म खराब रूपमा मृत्यु द्वारा सजाय गर्नुपर्छ?
अब म "द अनावश्यक" भनिन्छ मेरो दोस्रो पुस्तक लेख्न। यसलाई म अवान्छित यस संसारमा आए कसरी मेरो बाल्यकाल बारेमा।
यसलाई म एक बलात्कार थप वा कम थियो मलाई भन्नुभयो गरिएको छ। के म मेरो अर्को पुस्तक, अनावश्यक तपाईं भन्नुहोस्। म त अनावश्यक जस्तै गर्भपतन द्वारा मृत्यु संग सजाय हुनेछ?
म पुरानो वा बिरामी भने, म "euthanasia" द्वारा अनावश्यक रूपमा मृत्यु संग सजाय गर्नुपर्छ?
हामी दुवै नजन्मेको छोराछोरी, बिरामी र वृद्ध खतरनाक बाँचिरहेका छौं भनेर हेर्नुहोस्। तिनीहरूले सधैं तिनीहरूले मनमोहक वा बहुमूल्य पर्याप्त छैन किनभने हत्या गर्न सकिन्छ। शायद तिनीहरूले विचार यो पायो वा कसैले यसलाई भन्नुभयो छ।
साथीहरूसँग, गर्भपतन विरुद्ध देखाउने थिए त एक व्यक्ति माथि र भन्छन्: "तपाईं लज्जित छैनन् त्यो!" कदर जीवन लाज गर्नुपर्छ? यो कसरी विकृत भएको छैन? लज्जित गर्ने एक जो यो भने एक थियो।